Ukubhaliswa komshado. Imilayezo engu-10 Yomshado Wokuvumelanisa
Ngakho-ke, usanquma ukushada nomphefumulo wakho womshado. Sinikeza imiyalo engu-10 eyokusiza emva kokubhalisa umshado, ungaxabani futhi uphile ngokuthula nokuvumelana. Ngakho-ke, ake sicaphune imiyalo eyishumi yomshado ovumelanayo. Sibabala.
Khumbula ukuthi zonke izinkinga ozikhathalelayo, ngisho noma zingakukhathaleli bobabili, kufanele uxoxe nomphefumulo wakho womshado. Khumbula ukuthi manje ungumndeni futhi manje zonke izinkinga kufanele zixoxwe ndawonye. Uma ungahambisani nalo mthetho, ukubhaliswa kwakho komshado ngeke kuhlale isikhathi eside.
Emshadweni, awukwazi ukubona, khumbula futhi uzwe konke. Kumele futhi ukhumbule lokhu futhi uxoxe ngokuqiniseka okukhulu engxenyeni yakho yesibili, kungenjalo kungani ubhalisa umshado bese udala umndeni nomuntu ongathembi futhi osolise konke.
Ungagxeki futhi uvame ukugxeka umlingani wakho womphefumulo. Zibeke endaweni yesigamu sakho sesibili. Uma uhlaselwa njalo futhi unamathele kuwe? Kuze kube nini ungabekezelela zonke lezi zihlamba? Lezi zihlamba zizokhula zibe ukuxhashazwa nokuhlukunyezwa okuqhubekayo, ukuhlukunyezwa emndenini kuzokhula futhi ekugcineni ukubhaliswa komshado ngeke kuhlale isikhathi eside. Criticze kakhulu kangako, futhi kuphela uma lokhu kubalulekile ngempela! Ungagxeki neze izinto ezincane, zama nje ukujwayela ukushiyeka okuncane komlingani wakho.
Zama ukugwema ama-scandal anamandla nezigcawu ezivunguvungu nomphefumulo wakho womlingani, zama ukuxazulula izingxabano ngaphezulu kwezokuxhumana nokunciphisa ama-scandals kunoma iyiphi indlela elula kuwe.
Ungalokothi uxabane phambi kwezingane zakho. Lokhu kuphazamisa ingane yengqondo, futhi uzolahlekelwa igunya labo labazali. Izingane kufanele zikholelwe inhlalakahle yomndeni yabazali bazo futhi zibone ubuhlobo obuhle babazali, zithathele isibonelo somndeni wenjabulo. Izingane eziningi zikholelwa ukuthi isizathu sokuba abazali baxabane, lokhu ngokwabo, nokuthi abazali bayaphikisana ngenxa yabo, bazozizwa benecala.
Ngaphambi kokuba wenze noma isiphi isenzo kufanele ucabange ngazo zonke izikhathi eziyisikhombisa. Mhlawumbe lesi senzo ngeke sikhombise ukuxabana angayikhombisa. Futhi khumbula ukuthi inani lezingxabano alikwazi ukulingana, futhi ngokushesha noma kamuva kuholela ekuqedeni komshado.
Yonke imibuzo mayelana nokukhuliswa kwezingane njalo inqume ndawonye, ungalokothi uthathe noma yiziphi izinqumo eziqakathekile ngokwakho, njalo uthintane nomphefumulo wakho womshado.
Ungalokothi uthathe udoti ngaphandle kwendlu, vumela umehluko wakho ungahambi ngaphezu komngcele wendlu yakho. Vumela umndeni wakho uhlale nobungane kakhulu futhi ngaphandle kwemibango emndenini.
Embhangqwana oshadile, emva kokubhaliswa komshado, ayikho indawo yokwehla nokucasula.
Khumbula ukuthi injabulo yomndeni iyosuselwa emigomeni elandelayo: uthando, imvume yokubambisana, ukubalwa komunye.
Umndeni ojabulayo futhi oqinile awunjalo ngaso sonke isikhathi. Umndeni onamandla futhi onokwethenjelwa ungadala abantu abaqinile nabazimele. Sifisa sonke ukuba udale umndeni oqinile, othembekile futhi ngesikhathi esifanayo.
Amakholomu e-Wedding Tolyatti: amagama ngamakheli
Ingabe ufuna ukubuka i-chic ngosuku lwakho lomshado? Bese uqala ukwenza lezizinto ezingu-10 okwamanje!
Ukwakheka ithimba KVN "PFUR". abaculi omangalisayo
Warframe: Ukubuyekeza yomdlalo, izinhlamvu, izikhali
Kuyini Electronic Voice Phenomena?
Zesikhulisa "Odyssey": Izici kanye nokubuyekeza
Ikhekhe ezingajwayelekile noSuku Lothisha
Ngo "MegaFon" opharetha zokubhalisa zokuxhumana esungulwe mngcele: yini okufanele uyenze uma ufaka kulokho kuvinjelwa?
Ukubuyekeza: "Cere" izingane. Incazelo ukulungiselela
Tour e-Italy, Rome amahhotela
Ama-ejensi e Vladivostok. "Ipotimende" - inkampani yokulungisela abahambayo, Vladivostok
Sea of Japan, ikakhulukazi kwezokuvakasha